Weerarri COVID-19 hiyyummaa addunyaa hanqisuu akkasumas eegumsa fayyaa naannoo addunyaa ilaalchisee fooya’inni akka hin agargamne danqee jechuun gabaasi haaraa ba’e beeksisee jira.
Gabaasi dhaabbata Bill fi Melinda Gates kan waggaa akka jedhutti uummati addunyaa miliyoona 37 ta’u erga weerarri kun jalqabamee qabee hiyyummaa hamaaf kan saaxilame yoo ta’u, baatilee xiqqoo darban keessa qofaa dhibba irraa harka torbaan dabale.
Gama biraan lakkoobsi ijoollee talaallii dhukkuboota kan akka gifiraa fi tetaanosii fudhatanii kan dhibba irraa harka 80 ture bara 2020 keessa gara dhibba irraa harka 70tti kan gad cabe yoo ta’u, akka gabaasa kanaatti lakkoobsi kun erga bara 1990mootaa kan argamee hin beekne.
Lakkoobsi namoota COVID-19n qabamanii miliyoona 30 ga’ee kanneen vaayiresii kanaan du’an 928,000 ta’ee ennaa jiru kanatti biyyoonni hedduun sababaa faca’ina vaayiresii koronaahaaraan kan ka’e lammiiwwan isaanii irra uggura sochii cimaa kaa’aa jiran.
Muummichi ministeeraa Israa’el Benjamin Natanyaahuu guutummaa biyyattii keessaa namni turban sadiif akka manaa hin bane labsiin jedhu jimaata dhuftuu qabee hojii irra oola. Guyyaan kun jala bultii ayyaana waggaa Juushotaa ti.
Ennaa uggura kanaa manneen barnootaa martinuu, manneen nyaataa, galmaawwan gabaa fi hoteelonni cufaa ta’u. Lammiiwwan Israa’el mana isaanii irraa metera 500 ol akka fagaatanii hin deemne akkasumas mana keessatti yoo wal ga’an namoota 10 alatti yoo wal ga’an immoo namoota 20 akka hin caalle akeekkachiisi kennamee jira.
Natanyaahuun akka jedhanitti tarkaanfiin kun hunduma keenyaaf ulafaataa akka ta’e nan hubadha. Ayyaana waggaa nuti itti barre miti jechuu dhaan haasaa TV irratti dhageessisaniin beeksisaniiru.
Gama biraan magaalaaleen Ferensaay Bordoo fi Mah’see ennaa faca’inni vaayiresii koronaa haaraan ka’ee jiru kanatti tarkaanfii cimaa kan ofii isaanii kan sochii uummataa murteessu labsanii jiru. Jiraattonni magaalaalee lamaanii namoonni alatti 10 ta’uun akka wal hin geenyee fi dhugaatiin alkoolii manaa alatti akka hin dhugamne ittisanii jiran.